Dhul gariir xoogan oo ka dhacay Jabaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhul gariir xoogan oo ka dhacay Jabaan
Degadda Oarai Ibaraki ee dalka Jabaan oo ay biyo sabeynayaan
Dhul gariir xoogan ayaa waxaa uu ka dhacay xeebaha waqooyi bari ee duleedka dalkaas Jabaan, islamarkaasina duufaano kale iswata ay ku fideen ama ku tuurayey dalka intiisa kale. Ilaa iminka 19 ruux ayaa ku dhintay, balse booliska waxaa ay sheegeen iney qaadaneyso waqti ogaanshaha tirradda dadka ku geeriyooday, dhaawaca ay geysteen oo xoogan awgeed.
Johanna waa muwaadin reer Sweden ah waxaa ay haatan fasax ku joogtaa iyada saaxiibkeeda magaalada Tokyo, waxaa ay sii galeysay meel kafeega laga cabo markii uu dhul gariirku bilwoday.. Waa codkeedii iyadoo u warameysa idaacadda ekot.
”Waxaanu joognay meel kafeegga ah, markii anoo aan dalbaday sandawiishkeyga. Waxaan dareenay gariir. Balse kuwii ka shaqeynaayey ayaa nugu yiri wax dhibaato ah malaha. Kadib si dhaqso leh ayey u socotay. Kadibna waxaa la gaaray xilligii la baneyn lahaa dhismaha oo dibada loogu carari lahaa.
Kadib banaanka ayaan istaagnay jid weyn oo la gooyo, halkaasoo aan dareenay iney tahay mid aamin ah”
Wasaaradda arrimaha dibadda Sweden ayaa kula talisay dadka reer Sweden iney la socdaan wararka, xirriirana la sameeyey hey’adaha maxaliga ah ee mas’uulka ka ah xaaladaha adag. 400 ilaa 500 oo iswiidhish ah ayaa ku sugan magaalada Tokoyo oo ah xarrunta dalkaasi Jabaan.
Hey’ada badbaadda bulshada iyo diyaargowga ee marka la soo yaqaano MBS ayaa sameynaya u diyaar garow si ay u taageeraan safaarada Sweden ee Tokyo. Si loogu dirro shaqaale gacan ka geysta soo faarujinta. Sidaa waxaa warmurtiyeed ku yiri xogheynta warfaafinta ee MBS oo wakaaladdda TT u sheegay. Haddii Jabaan ay codsato gar gaar waxaa jito diyaar garow ah siddii gar gaarka ah ambalaata helokptar-ka ah iyo team ama koox baadi goob ka geysataa goobihii ay dhul guriirku ku dhifteen ee soo dumay.